Fampiasana tany midadasika :: Voafehin’ny fepetra hentitra ireo vahiny manana tetikasa • AoRaha
Fampiasana tany midadasika Voafehin’ny fepetra hentitra ireo vahiny manana tetikasa
Tsy homenany vahiny amin’ny ambongadiny ireo tany midadasika eto Madagasikara. Hamaritra fepetra maro mikasika ny fampiasana an’ireo toerana hahafahana manatanteraka tetikasa, indrindra fa ho an’ireo vahiny mikasa hamboly na hanangana indostria eto amintsika, ny fitondram-panjakana. Eo, ohatra, ny famaritana ny lalàna mikasika ny fananganana fotodrafitrasam-pampandrosoana amin’ireo faritra manokana (Zone émergence de Madagascar).
«Tokony hazava, dieny izao, ireo fepetra ireo sy ny politika hoentina hanatanterahana ny asa mba tsy hisian’ny olana. Mila fantarina sy faritana mazava, izany hoe: tetikasa tahaka ny ahoana no tanterahina amin’ireo faritra ireo? Tetikasa momba ny fizahan-tany ve? Ohatra, na ihany koa tetikasam-pambolena, na fananganana indostria”, hoy ny minisitry ny Varotra sy ny indostria ary ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa, tamin’ny alalan’ny antso an-tariby, omaly.
Nankatoavina nandritra ny Filankevitry ny governemanta, tamin’ny herinandro lasa teo, ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ireo minisitera mpikambana ao anatin’ilay komity hisahana ny fandrindrana ny fomba fampiharana tetikasa amin’ireo faritra manokana ireo. Isan’izany ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy , ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny minisiteran’ny Varotra sy ny indostria ary ny asa tanana, ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratekika , ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra.
Tetikasa ao “Bas Mangoky”
Samy hanana ny anjara andraikitra eo amin’ny fanaraha-maso ny fampiasana an’ireto faritra manokana ireto io komity ifarimbonan’ireo minisitera io. Miankina amin’ny tetikasa tsirairay izany fepetra izany, ka hofaritana hatramin’ny vola tokony hiditra amin’ny fitondrampanjakana. Isan’ireo tetikasa efa handeha, atsy ho atsy, ohatra, ilay fambolena goavana hiarahana amin-dry zareo Arabo any “Bas Mangoky”.
Voalaza fa efa miroso tsikelikely ny fifampiresahana mikasika izany, amin’izao fotoana izao. Nambaran’ireo depiote teraky ny faritra misy an’ity fanorenana tetikasa ity, tamin’ny sabotsy teo, fa “tsy manana olana amin’ny fanatanterahana an’izany ireo tantsaha any an-toerana”. Na izany aza tsy maintsy hisy ny fanaraha-masoakaiky ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fanarahana an’ireo fepetra samihafa ireo , mialoha ny fanombohana ny asa rehetra any an-toerana.
Isan’ireo tetikasa hametrahana fepetra ihany koa ny ao amin’ilay toerana hananganana orinasa afaka haba ao Moramanga. Eo ihany koa ny fanorenana fotodrafitrasa any amin’ireo toerana fizahantany any amoron-tsiraka.
Antenimierampirenena :: Depiote roa noesorina tsy ho isan’ ireo olom-boafidy intsony
Fisorohana valanaretina :: Voarara tsy mahazo mitondra olona avy any Shina ireo fiaramanidina